”Annagu ma noqonayno jid loo maro xiriirka Israel!” – Maamulka Falastiin oo diidey deeqdii ka timid Imaaraadka! | Hadalsame Media
Goorma ayuu dib u bilaabmayaa duullimaadkii Turkish Airlines ee Muqdisho?
Caddaan ku hubaysan qoryaha meelaha fog wax ka shiisha oo lagu…
Ruushka oo Turkiga ka caawinaya farsamaynta dayuurado & gantaalo casri ah…
GALKA BAARISTA: Maxaad ka ogtahay hardanka siyaasadeed ee Gobolka Gedo? (Dhegeyso)
Home Arrimaha Caalamka ”Annagu ma noqonayno jid loo maro xiriirka Israel!” – Maamulka Falastiin oo...
”Annagu ma noqonayno jid loo maro xiriirka Israel!” – Maamulka Falastiin oo diidey deeqdii ka timid Imaaraadka!
(Daanta Galbeed) 21 Maajo 2020 – Dowladda Falastiin ayaa diiddey inay qaadato shixnad gargaar caafimaad ah oo ay Imaaraadku ugu tala galeen, sida ay sheegtay Wakaalad Wareedka Falastiin ee Maan News Agency oo aad ugu dhow Maamulkaasi.
Diidamada ayaa loo cuskaday in Imaaraadku ay u mareen waddo khaldan oo ah dhanka Israel, tiiyoo ay weliba jirto in Imaaraadku aanu xiriir diblomaasi oo rasmi ah la lahayn Tel Aviv.
“Imaaraadka lama soo xiriirin Maamulka Falastiin, kahor intii aanay gargaarka soo dirin. Falastiin ma ogola in laga dhigto buundo loo maro xiriirka ay Imaaraadku ka doonayaan Israel,” ayay wakaaladdu kasoo xigatey ilo ku dhow Maamulka Falastiin.
Waxay sheegeen in gargaar kasta oo loo dirayo Falastiin marka koowaad lagala soo xiriiro Maamulka Falastiin, iyagoo sheegay in Imaaraadku uu tillaabadan ku qarinayo ujeeddo kale oo ah inuu ”caadiyeeyo xiriirka uu la leeyahay Israel.”
Marka laga reebo Urdun iyo Masar oo Israel la heshiiyey 1994-kii iyo 1978-kii, sida ay u kala horreeyaan, dalka kastoo kale oo Carbeed wuu dafiraa inuu xiriir diblomaasi la leeyahay Israel oo sharci darro ku haysata dhulka reer Falastiin.
Previous articleDAAWO: Ma malayn kartid sida loo qurxiyey FADHIGA Tiyaatarka Qaranka + Sawirro xul ah
Next articleXaftar oo Turkiga u diray hanjabaad culus kaddib markii uu Ruushku siiyey 8 miig & Turkiga oo hanjabaad kale uga jawaabey!! + Sawirrada dayuuradaha la siiyey
Caddaan ku hubaysan qoryaha meelaha fog wax ka shiisha oo lagu arkay xaafado ay dibedbaxyo ka socdaan (Dadka oo taxaddar la faray)
(Hadalsame) 02 Juun 2020 - Maraykanka oo badiyaa caalamka u booliiseeya kuna canaanta in lagu xadgudbey ''xuquuqul insaanka'', ayaa waxaa haatan ka socda falal...
Saacadaha, maalmaha & taariikhaha la dheelayo kulamada harsan ee Serie A oo la iclaamiyey
Ruushka oo Turkiga ka caawinaya farsamaynta dayuurado & gantaalo casri ah (Wada hadal socda)